Ndị ọbịa na-ewe iwe na-ewe iwe ghara imegharị tiketi - Thrilltalk.com
Home/Nieuws/Ọbịa Efteling na-ewe iwegharị tiketi
Ọbịa Efteling na-ewe iwegharị tiketi
0 15 Nkeji 1
De Albert Heijn Promotionkwalite ịkwalite ụlọ bụ aha ezinụlọ na Netherlands ruo ọtụtụ afọ ma jiri ọtụtụ ezinụlọ na-eji ya. N'oge oyi a, ọtụtụ ezinụlọ agaala Oge oyi zubere mana n'ihi ịrị elu onu ogugu enwere oria na mkpọchi mkpọchi enweghị ike ịga n'ihu na. Na mkpọchi gara aga na Nọvemba, ọ nwere ogige akụkọ ifo tiketi ndị dị irè n'oge ahụ gbatịpụrụ site na ụbọchị 30. Nke ahụ agaghị eme n’oge a.
Nkeji 55 gara aga
Efting tiketi anaghị emegharị
Ọ bụrụ na ịmebe ndoputa n'oge a na-emechi ogige ahụ, ị ​​ga-enweta ozi site na ogige ahụ na onyinye ị ga-abịa na 2021. Ọ bụrụ na ị ka na-eme atụmatụ ime ka a ndoputa na tiketi irè ruo mgbe December 18, mgbe ahụ ị na-mwute ikwu na nke chioma. Ọ bụrụ na ị bi na Belgium na Albert Heijn ị zụta tiketi mgbe ahụ ị na-enwe obi ụtọ. A ga-agbatị ndị a ruo mgbe ọnwa Machị 28, 2021. N’ezie, ndị bi na Belgium enweghị ike ịga n’ogige ahụ n’ihi usoro ndị gọọmentị Belgium kwupụtara ya mere ogige ahụ ahọrọla ịgbatị otu a.
Mkpesa na soshal midia
Na soshal midia, mmiri na-ezo gbasara ndị na-eri iwe bụ ndị zụtara tiketi narị narị euro mana anaghị ekwe ha gaa. Ọtụtụ mmadụ etinyela mkpesa na Associationtù Ndị Ahịa, ndekọ ego na mkpesa weebụsaịtị Klacht.nl iji gosipụta afọ ojuju ha.
Efteling na-agwa Thrilltalk: De Albert Heijn tikeeti izizi dị ire rue Nọvemba 15, 2020. N'oge ahụ anyị ekpebiela ịgbatị ndaba ya, na-esote mmechi izu abụọ, ruo na Disemba 18, 2020. Tupu mmechi nke abụọ na n'etiti mmechi nke abụọ na nke atọ, enwere , na echiche anyị, enweela ohere zuru oke iji gaa Efteling. Maka nke a, ekpebiela na ọ gaghị emegharị nkwado nke tiketi ndị a ọzọ. Ọbịa onye mere a ndoputa na oge site na December 15 na December 18 na Albert Heijn tiketi ga-enweta ozi-e site n'aka anyị yana ozi ndị ọzọ.
Albert Heijn iwe akwụ ụgwọ Associationtù Ndị Ahịa Na-agbatị mkpesa
Efteling designer jury so na Merry Little Christmas
Super Nintendo World mepere February 4 na Universal Studios Japan